Manazava ny fomba hikirakana ny data miaraka amin'ny Scraping Tool ny Semalt
. Izany dia mamela antsika hanangona angona avy amin'ny loharano samihafa ary manampy amin'ny fitomboan'ny orinasa. Nandritra ny taona maro, tranokala no nampiasaina mba handraisana ny vaovao avy amin'ny tranonkala isan-karazany, lisitry ny lahatsoratra, seha-pifandraisana an-tserasera, vavahadin-tserasera, fampahalalam-baovao, ary tranonkala. Ny Screen Scraping dia fitaovana vaovao, ary tsy mila fahaiza-mampiasa programa ianao mba hahazoana tombony avy amin'izany. Ity fitaovana ity dia tena tsara ho an'ireo orinasa sy mpikirakira mahaleotena satria afaka manatsotra ny asanao sy haingana kokoa. Ny singa fototra amin'ny fitaovana Scraping Screen dia voalaza etsy ambany.
1. Mampitaha ny vidiny mora
Amin'ny fitaovana Scraping Screen, azonao atao ny mampitaha mora foana ny vidin'ny tranokala isan-karazany toy ny Amazon sy eBay. Izy io koa dia manangona, manomana sy manara-maso ny kalitao amin'ny angon-drakitrao rehefa atambatra izany. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia manitsy sy mamaha ireo olana madinidinika rehetra ary manampy anao hahazo ny fampahafantarana ny vidin'ny vokatra samihafa.
2. Ny fanakanana ireo tranonkala media sosialy
Ny mpikamindamina sy ny mpikirakiera dia matetika mitaraina fa ny fitaovana fanoditra tsotra dia tsy afaka mamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala sosialy. Tsy toy ireo fampihetseham-pako ireo, ny Screen Scraping tool dia mamoaka ireo angon-drakitra ilaina avy amin'ny Facebook sy Twitter ary mandrindra izany amin'ny format manan-takaitra.
3. Manao fikarohana an-tserasera mora
Ity fitaovana ity dia tsara ho an'ny mpikaroka, mpampianatra ary mpianatra satria manala ny angona avy amin'ny gazety an-tserasera sy ny eBooks mora. Azonao atao ny manakona ny votoatin'ny tranonkalan'ny fanabeazana samihafa ary apetanao ho azy manokana izany. Saingy mila mikarakara ny zon'ny mpamorona sy ny marika ianao raha manaisotra angona avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera. Amin'ny ankapobeny, ity fitaovana ity dia manampy ireo mpianatra hahazo sy handamina ny fampahalalana avy amin'ny toerana samihafa. Manampy azy ireo hanomana andraikitra marina izany ary hikapoka hatramin'ny pejy Internet iray alina ao anatin'ny adiny iray.
4. Mpandroba mahery vaika:
Screen Scraping dia fitaovana avo lenta amin'ny fampidirana endritsoratra isan-karazany. Izany dia mamela antsika handefa mpitsikilika maromaro amin'ny fotoana iray, ary tsy mila manara-maso ny zava-mitranga any aoriana. Manasongadina ny angon-drakitra izahay ary ity fitaovana ity dia mitahiry ny fampahalalam-baovao voasintona ao amin'ny tahiry manokana. Ankoatra izany, azonao ampiasaina izany mba hikolokolo ny tranonkala sarotra maro ary hanatsara ny fahombiazan'ny tranonkala. Ny fitaovana fandinganana ny Scraping dia tsara ho an'ny webmasters ary manampy azy ireo hanatsara ny fizotry ny milina fikarohana ao amin'ny tranokalany sy ny bilaogy.
Daty famandrihana amin'ny alalan'ny fitaovana famafazana scraping:
Ho an'ny fandefasanao, dia ity misy famaritana ny fomba hanombohana tranonkala miaraka amin'ity fitaovana mahagaga ity:
Dingana 1: Tsindrio amin'ny fitaovana Scraping Screen ao amin'ny tabilao fanorona. Ity fitaovana ity dia hahitana ny singa tsirairay miaraka amin'ny soatoavina miavaka.
Etap 2: Zava-dehibe ny fisafidianana ny fomba fametahana sy ny endriky ny angon-drakitrao. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana Scraping dia mamoaka ny angona amin'ny format CSV sy JSON.
Dingana 3: Tsindrio ny bokotra Continue mba hanombohana ny fanasarahana. Ity fitaovana ity dia hanangona ny fampahalalana ho anao voalohany, handamina sy hikororosy azy amin'ny endrika tsara. Aza adino ny mamoaka ny angon-drakitra voasariky ny fiaranao mafy ho an'ny fampiasana ivelan'ny aterineto Source .